विचार – NepalNewsTime
Nepal News Time	April 9, 2018
विल गेट्स आफ्नो करियरमा सफल छन् भनेर शंका नगर्दा पनि हुन्छ । सफ्टवेयर कम्पनीका मालिक गेट्स सफलता हात पार्ने मामिलामा कमजोर छैनन् । बिजनेस क्षेत्रमा विल गेट्सबाट थाहा पाउन सकिने कुराहरू अत्यन्तै धेरै छन् । उनीबाट सिक्नुपर्ने केही कुराहरू तल दिइएको छ– १) ठूलो उद्देश्य– बिल गेट्सले माइक्रोसफ्टको विकास गर्लान् भनेर धेरैलाई विश्वासै थिएन । […]
सफलताका लागि तपार्ईंले त्याग्नुपर्ने ५ बानी
‘सफल जिन्दगी’ भनेको के हो ? धेरै मान्छे सफल जीवन जिउनेबारे कुरा गर्छन्। तर, सफल जीवन भनेको के हो ? के यो भनेको सुविधामा बस्नु हो ? अध्ययनहरूले के बताउँछ भने सफल मानिसहरू नै बढी आत्महत्या गर्छन्। यदि सफलता पैसासँग मात्र जोडिन्छ भने धनी मान्छेले कहिल्यै आत्महत्या गर्ने थिएनन्। मान्छेहरू सफल हुन् कि हैनन् भनेर […]
म मृत्युसँग डराउँदिन । तर मलाई मर्नका लागि हतार छैन । मेरोलागि गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ ।’ वर्तमान युगका महान बैज्ञानिक स्टिफन हकिङ यसै भन्थे । तर, अब उनको भौतिक शरीर हामीबीच छैन । शारीरिक रुपले अशक्त भएर पनि उनी पुरै युग हाँक्ने बैज्ञानिक थिए । जबकी विद्यालय जीवनमा उनी अति सामान्य विद्यार्थी थिए […]
मनकारी युवतीले नवदुर्गाका विद्यार्थीलाई गरिन् सहयोग
पुनर्वास । पुनर्वासको सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको नवदुर्गा प्राथमिक विद्यालयका १११ जना विद्यार्थीहरुलाई मनकारी युवती सबु गुरुङले झोला लगायतका शैक्षिक सामाग्री बुधबार बितरण गरेकी छिन । बिपन्न र राजधानीका खाते बालबालिकाहरुलाई साहायता गर्दै आएकी युवती गुरुङले पश्चिम नेपालको बिपन्न समुदायको बस्तीमा रहेको उक्त विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री बितरण गरेकी हुन । पुनर्वास नगरपालिका ७ बुद्धबस्तीका स्थानीय […]
एमाले र माओवादीले ‘कोर मधेश’ मै उठाए पहाडी उम्मेदवार, कुन दलबाट कति मधेशी?
काठमाडौं : नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि दुई नम्बर प्रदेशबाट एक जना मात्र उम्मेदवार उठाएको छ। जसमा एमालेले पहाडी मुलका सुमन प्याकुरेललाई खुल्ला तर्फबाट उम्मेदवार बनाएको हो। अर्थात् दुई नम्बर प्रदेशमा मधेशीको भोट पाएर गैर मधेशीलाई उम्मेदवार बनाउँदा एमालेभित्र आलोचना भएको छ। पाँच नम्बर प्रदेशमा एमालेले पाएको चार सिटमध्ये पश्चिम नवलपरासीका रामलखन हरिजनलाई दलित कोटाबाट […]